2010-12-12 ~ Myanmar Express
ပေစာ - ၅
ရာဇ၀င်မော်ကွန်းဘယ်လောက်ထွန်းလည်းရွှေခေတ်အချိန်ခါ လွန်လေပြီ... ။ရွှေရောင် မှေးမှိန်ဂုဏ်သတင်းတိမ်လည်းငါသည် မုချ မြန်မာ ဖြစ်၏... ။ငါ့နိုင်ငံအောက်ရေချို မရောက်လည်းရေငန်သောက်၍ဆက်နေမည်...။ငါ့နိုင်ငံမြေလွန်သေးသိပ်၍ချိုမြိန်သစ်သီင်္း မဖြစ်ထွန်းလည်းရှိသမျှသစ်ခေါက်ဖျော်ကာသောက်၍အသက်ဆက်ကာ ငါနေမည်...။နိုင်ငံစွန်ခွာဝေးရပ်ရွာ၌...ပြည်ရွာမကောင်းကြောင်းတိမ်းစောင်းသမုတ်အကြိုးယုတ်အောင်လှီဆယ်ရှာစားလူ့ငနွား လည်း ငါမလုပ်ပေ...။ဘယ်လောက် ရောင်မှိန်အလွန်သေးသိမ်လည်းငါပင် လေလွှင့်သစ်ရွက်ဖြစ်သော်ငါ့နိုင်ငံလေ ခေါ်ဆောင်ရာ၌ငါရွက်လွှင့်မည်....။အဖန်ဖန်သေဆုံးလူဖြစ်အုံးကဤမြေ၌ပင်အသက်ဆက်မည်......။ ။(နေနက် 16/12/2010)Myanmar Express
ပေးစာ - ၄
အမေဖတ်ဖို့………..ရေးတဲ့စာကျန်းမာတော်မူပါလေစ အမေ…. အမေအစစ အရာရာ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်… အမေ့ဘေးက ခမောက်ဆောင်းတဲ့ သူတွေက အမေ့ကို အစစ အဆင်ပြေအောင် ကူညီကြမှာပါ…. မကူညီလို့လဲ မဖြစ်ဘူးလေ သူတို့တွေက အမေ့ကျေးဇူးတွေနဲ့ ဒေါ်လာစားတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေ….ဒါနဲ့ ကြုံလို့ပြောရအုံးမယ်… ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်လေးကို အမေ မှတ်မိသေးတယ်မလား…. ကျွန်တော်တို့ လမ်းထိပ်က စာရေးဆရာလေးလေ အမေသိမှာပါ…. သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်မီးမမှန်တဲ့ အကြောင်းကို မီးမရှိတဲ့သူ့အိမ်လေးကနေပြီး ဖယောင်းတိုင်လေးထွန်းလို့ တစ်ကုတ်ကုတ်ရေးနေလေရဲ့…. ရပ်ကွက်ထဲကသူတွေကလဲ ကိုယ့်ရပ်ကွက်မကောင်းကြောင်းပြောရင် သိပ်ကြိုက်တာပဲလေ….. ကျွန်တော်တို့ခေါင်းရင် အိမ်က လူပျိုကြီးမိုးသီးကလဲ ရပ်ကွက်ထဲက ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်တာကအစ သူများတွေကို လိုက်ပြောရင်း ကောင်းစားနေပြီဆိုပဲ…. ကျွန်တော်တို့ခြေရင်းက အရက်သမားလင်မယားကို သိတယ်မလား…. ယောက်ျားက တစ်နေကုန်အရက်သောက် မိန်းမက တစ်နေ့လုံး အတင်းလိုက်ပြောနေတဲ့လင်မယားလေ… သူတို့ကလဲ စီးပွားရေးကျပ်တည်းတယ်လို့ ညီးနေလေရဲ့…. ကျွန်တော်တို့ တစ်လမ်းကျော်မှာနေနေတဲ့ ဟိုဦးလေးကြီးလဲ မိုးလင်းမိုးချုပ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်းနဲ့ ဒီမိုရရင်တော့ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေပြီလို့ပြောတာပဲ………… သားသူငယ်ချင်း ဖိုးထောင် ကိုသိတယ်မလား…. သူလည်း အခုနိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်အမေ… အရင်းအနှီးကတော့ မများပါဘူး ဒီကနေ ကင်မရာ အစုတ်လေးတစ်လုံးတော့ ယူသွားတယ်…. ဟိုရောက်ရင် အတိုက်ခံ သတင်းသမားလုပ်မလို့လေ…. အခုတော့ ဒေါ်လာတွေစားနေရလို့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့တော့ကြားမိတယ်…. ကျွန်တော်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်က ကောင်လေးတောင်မှ လိုက်သွားမလို့လုပ်နေတယ်… တစ်နေကုန်သင်တန်းတွေသွားတက်နေတာပဲ…. ကမ်းနားသွားပြီး ကူလီထမ်းကျင့်တယ်ဆိုလား ဘာလားပဲ…. မနေ့ကတောင် အမေ့သမီး ကျွန်တော့ညီမတောင်မှ လက်တစ်ဝါးလောက် စကတ်လေးနဲ့ ကြိုးမပါတဲ့ အကျီသေးသေးလေး ၀ယ်လာသေးတယ်… ကျွန်တော်က ဘာလုပ်ဖို့လဲလို့မေးတော့…. ဒီမိုကရေစီရရင် အသင့်ဖြစ်အောင်လို့ အခုတည်းက ၀တ်တာကျင့်မလိုလို့တော့ ပြောသေးတယ်….. ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်သေးပါတယ်….. ညီမလေးနားကြားလွဲတယ်ထင်တယ်လို့…. ဒီမိုကရေစီပါ ညီမလေးရယ် sexyကရေစီ မဟုတ်ပါဘူးလို့….. ကျွန်တော်တို့အ်ိမ်မျက်ဆောင်းထိုးမှာနေတဲ့ ဆိုက္ကားသမားလေးကတောင်မှ အခုဆိုက္ကားမနင်းတော့ဘူးအမေ…. နေ့စား နိုင်ငံရေးသမားဆိုလား လုပ်နေတယ်ပြောတယ်…………..အမေကတော့ ဒီမိုကရေစီလို့ ခဏခဏပြောနေတာပဲနော်…. ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံကြီးလား….. ၀န်ထမ်းတွေ ဒလဟော အလုပ်ပေးနေတဲ့ အလုပ်ရုံကြီးလား…… အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို ပိုက်ဆံထုပ်ပေးနေတဲ့ ဘဏ်တိုက်ကြီးလား……. လို့စဉ်းစားမိတယ်…. ဒီမိုရရင် မီးမှန်မယ်… ဒီမိုရရင် စီင်္းပွားရေး အဆင်ပြေမယ်… ဒီမိုရရင် အလုပ်တွေရမယ် လို့ပြောသံတွေကြားနေလို့လေ…. အမေ အမြဲနေကောင်းပါစေလို့ သူငယ်ချင်း ဖိုးထောင်ကလဲ အမြဲဆုတောင်းနေတယ်တဲ့….ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါတယ်…. အမေ ရှိမှ အမေ့အကြောင်းတွေကို အမေလေလည်တာက အစရေးမှ သူတို့ ဒေါ်လာတွေရနေတာကိုး…. ဟိုတစ်လောကတောင် ကျွန်တော် အွန်လိုင်းပေါ်တက်ဖြစ်လို့ သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်လိုက်သေးတယ်…. ဖတ်နေရင်းနဲ့ လန့်တောင် လန့်သွားတယ်အမေ…. သတင်းတွေကတော့ ချက်ခြင်းပဲ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးထဖြစ်တော့မယ့်ပုံတွေဖြစ်နေလို့လေ….စာတော့ နဲနဲရှည်သွားတယ်…. အမေလဲ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါအုံး…. အမေ မရှိရင် ထမင်းငတ်သွားမယ့်သူတွေ အများကြီးရှိတယ် အမေ…. အမေလည်း အသက်တွေကြီးပါပြီ အမေ… အခုဆိုရင် ခိုင်းကောင်းအောင်ပေးထားတဲ့ ဘွဲတွေကလဲ အမေ့စီမှာ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းနဲ့လေ…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးအမေ….. ကျောင်းသားတွေကလဲ သပိတ်မှောက်ဖို့ထက် ကျောင်းတွေ မပိတ်ဖို့ကို ပိုပြီးဦးစားပေးနေတယ်… အရပ်သားတွေကလဲ တော်လှန်ရေးထက် ကုန်ဈေးနှုန်းမတက်ရေးကိုပဲ ပိုပြီးဦးစားပေကုန်ပြီအမေ….စာတော့ နဲနဲရှည်သွားတယ်…. အမေလဲ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါအုံး…. အမေ မရှိရင် ထမင်းငတ်သွားမယ့်သူတွေ အများကြီးရှိတယ် အမေ….ပြောချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲအမေ…… ဒါပေမယ့်လဲ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျွန်တော့စာကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်အမေ….. Myanmar Express
နမောတသ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္ဗာသမ္ဗုဒ္ဓဿ အပိုင်း ၁မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုကြည့်ပြီး သတိသံဝေဂရကြစေရန် ဤဆောင်းပါးကို မူရင်းအတိုင်းတင်ဆက်လိုက်ပါသည်။မြတ်စွာဘုရားသည် မုန်းတီးမှု၏အကျိုးတရားများကို ကောင်းစွာ သိနားလည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မုန်းတီးမှုဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိတို့၏ ဘဝကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသောသူတို့ကို မြတ်စွာဘုရားမြင်တွေ့တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် '' မုန်းတီးမှုကြောင့် မုန်းတီးမှုသည် မပြီးဆုံးနိုင် '' '' သင်အမုန်းပွါးလေလေ အခြေအနေပိုဆိုးရွားလေလေ''ဖြစ်ကြောင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသားမိန့်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။သင်ကကျွန်ုပ်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုပိုမုန်းလာ၏။ ဤသို့ဖြင့် မုန်းတီးမှုက တဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလာရာ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းမုန်းတီးမှုဟူသော မီးလောင်တိုက်တွင် လောင်မြိုက်ခြင်းခံရသည်အထိဖြစ်၏။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ တဘက်ဘက်က အမုန်းပွါးမှုကို ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရား မြင်တော်မူ၏။တဘက်ဘက်ကဖြစ်စေသို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးကဖြစ်စေ၊ မုန်းတီးမှုကိုမိတ်ဖြစ်မှုနှင့် သို့မဟုတ် ချစ်ခင်မှုနှင့် အောင်နိုင်အောင်မကြိုးစားလျှင် ဤမုန်းတီးမှု အစဉ်အတန်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ဆုံးခန်းတိုင်မည် မဟုတ်ချေ။(ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၊ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ခေတ်သစ်ဘဝ၊ စာမျက်နှာ ၅၅-၅၆)ကျွန်တော်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းအားဖြင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းတာဝန်ကို ၃၅ နှစ်မျှ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ကံအားလျှော်စွာ ယင်းနိုင်ငံများသည် အများအားဖြင့်မူစလင်များရှိသော နိုင်ငံများဖြစ်နေပါသည်။ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီဂျစ်ပြည်၊ ယူဂိုစလပ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ယင်းဒေသရှိမူစလင်များအကြောင်းကို အနီးကပ် လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ များမကြာမီက ဖြန့်ချီနေသော '' မျိုးပျောက် မှာစိုးကြောက်ရ '' အမည်ရှိ မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေး (ဝါ) ကုလားမူစလင်ဆန့်ကျင်စာတမ်းတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ဤစာတမ်းပါအချက်အလက်များကိုလေ့လာကြည့်သောအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်တရားဝင်ဖြန့်ချီနေသော အာရိယာစမာခ်ျ (ခေါ်) အာရိယာသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ R.S.S ၊ ဂျန်နဆင်းစသည်ဖြင့် ဟိန္ဒူတယူသန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာတမ်းပါအချက်အလက်များ ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်လောက်ကစ၍ မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်လာခဲ့ရာ အိန္ဒိယတိုက်နယ်ဒေသတွင် ပါကစ္စတန် နှင့် အိန္ဒိယဟူ၍ နှစ်နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာခြင်းသည်သာ အမှတ်ထင်ခဲ့ရသည်။ မူစလင်လူမျိုးများရှိရာဒေသသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဖြစ်ခွဲထွက်သွားသော်လည်း ယနေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်မူစလင်တို့ အင်အားကားကြီးထွားဆဲပင်ဖြစ်သည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လိုသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မူစလင်တို့နှင့် အပေးအယူပြုလုပ်ရလေ့ရှိသည်။ အရင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော V.I.P ဟိန္ဒူအစွန်းထွက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းသည်ပင် အာဏာရရှိရန် သူတို့၏ မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံများနှင့် ခံယူချက်စောင်ပုဒ်များကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ရသည်။'' မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ '' စာတမ်းတွင်ပါဝင်သကဲ့သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဟိန္ဒူများသည် မူစလင်များကိုမုန်းတီးသည်။ အတိတ်ကခဲမှန်ဖူးသည်ဟူသော ရေးသားချက်ကား လုံးဝပင်မှားယွင်းနေသော ဖော်ပြချက်ဖြစ်နေသည်။ တခါတရံဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းမှအပ အိန္ဒိယသားတို့သည် တူညီသောအမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် ထားရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုကြည့်ပြီး သတိသံဝေဂရကြစေရန် ဤဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်သည်။မြတ်စွာဘုရားသည် မုန်းတီးမှု၏အကျိုးတရားများကို ကောင်းစွာ သိနားလည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မုန်းတီးမှုဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိတို့၏ ဘဝကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသောသူတို့ကို မြတ်စွာဘုရားမြင်တွေ့တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် '' မုန်းတီးမှုကြောင့် မုန်းတီးမှုသည် မပြီးဆုံးနိုင် '' '' သင်အမုန်းပွါးလေလေ အခြေအနေပိုဆိုးရွားလေလေ''ဖြစ်ကြောင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသားမိန့်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။ သင်ကကျွန်ုပ်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုပိုမုန်းလာ၏။ ဤသို့ဖြင့် မုန်းတီးမှုက တဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလာရာ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းမုန်းတီးမှုဟူသော မီးလောင်တိုက်တွင် လောင်မြိုက်ခြင်းခံရသည်အထိဖြစ်၏။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ တဘက်ဘက်က အမုန်းပွါးမှုကို ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရား မြင်တော်မူ၏။တဘက်ဘက်ကဖြစ်စေသို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးကဖြစ်စေ၊ မုန်းတီးမှုကိုမိတ်ဖြစ်မှုနှင့် သို့မဟုတ် ချစ်ခင်မှုနှင့် အောင်နိုင်အောင်မကြိုးစားလျှင် ဤမုန်းတီးမှု အစဉ်အတန်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ဆုံးခန်းတိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ (ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၊ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ခေတ်သစ်ဘဝ၊ စာမျက်နှာ ၅၅-၅၆)ဘုံပျောက်မှာ စိုးကြောက်မိရှာ နောက်ဆက်တွဲ အပိုင်း ၂တခါတရံတွင်မူ အိန္ဒိယ၏ရိုးရာဓလေ့များ၊ အနုပညာများကို မူဆလင်တို့က ပိုမိုစွဲမြဲစွာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့များသည် သူတို့အာဏာရရှိရေးအတွက် အသုံးချလေ့ရှိသည်။ အယုဒ္ဓယဗလီကျောင်းမြေနေရာသည် ဟိန္ဒူဘုရားပွင့်ရာ နေရာဖြစ်သည်ဟု အတိုက်အခံတို့က နိုင်ငံရေးအရအသုံးချခဲ့သည်။၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဟိန္ဒူအစွန်းထွက်များက အယုဒ္ဓယဗလီကျောင်းကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမြောက်များစွာ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ယင်းအယုဒ္ဓယဗလီကိစ္စကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ရူပီငွေကုဋေပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ဆုံးရှုံးပြီး၊ လူပေါင်း တစ်သိန်းနီးပါးသေခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်ဖက် မူဆလင်နိုင်ငံများဝယ် ဈေးကွက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ယင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌သာမဟုတ် ဥရာပတိုက်ရှိ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထိဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မူဆလင်တို့သည် သူတို့ဘာသာဝင်များကို ကမ္ဘာ၏ဘယ်အရပ်ဒေသတွင်မဆိုထိခဲ့လျှင် သူတို့ဘက်ကတန်ပြန်ကလဲ့စားချေသည့်အလေ့ရှိသည်။၁၉၈၇ ဝန်းကျင်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့တွင် ဗလီဘုရားကျောင်းနှင့် မူဆလင်တို့၏ အိမ်ယာများဖျက်ဆီးခံခဲ့ကြရသည်ကို အကြောင်းပြု၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဗောရောဗုဒ္ဓောဘုရားကျောင်း၏ အရံစေတီတစ်ဆူကိုဖျက်ခဲ့သည်တို့ကိုမမေ့အပ်ပေ။၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗလီဘုရားကျောင်းများကို မြန်မာတို့မှဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည့် သတင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့မူစလင်တို့ မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရာ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ တာလီဘန်တို့က သူတို့နိုင်ငံရှိတောင်ကြီးထက်တွင် ထုလုပ်ထားသည့် ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘုရားရုပ်ထုကို ဖောက်ခွဲဖြစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သေးသည်။ ဤကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂယူနက်စကိုက မေတ္တာရပ်ခံမှ သူတို့လက်လျော့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ဗုဒ္ဓအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးအများအပြားသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကိစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အများအပြားရှိနေသည်။သူတို့သည် ယင်းအထိမ်းအမှတ်များကို သူတို့၏ရှေ့ဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်ဂုဏ်ယူဖောပြလေ့ရှိသည်။ ပါကိစ္စတန်နိုင်ငံသည် တက္ကသီလာအပါအဝင် ယင်းရှေးဟောင်းဂန္ဓာရ ယဉ်ကျေးမှုကိုအကြောင်းပြု၍ နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များထံမှ နိုင်ငံခြားငွေအများအပြား သန်းချီရရှိနေသည်။ကျွန်တော်မူစလင်နိုင်ငံတွင် မူစလင်တို့စပ်ကြားတွင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်က ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သော ပါရဂူများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါသည်။ သူတို့အဆိုအရ မူစလင်တဦးသည် အခြားဘာသာဝင်တဦးကို တနည်းနည်းဖြင့်ဒုက္ခပေးခဲ့လျှင်လည်းကောင်း၊ အခြားဘာသာတို့၏ ဘုရားကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့လျှင်လည်းကောင်း၊ သူတို့၏အလ္လာဟ်ဘုရားက အပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသူသည် ငရဲကျမည့်အကြောင်း သူတို့ဘုရားစာကိုရမ်ကျမ်းတွင် ပညတ်ထားကြောင်းပြောပြကြသည်။ ကျွန်တော်ကလည်းအတိတ်ကာလက မူဆလင်တို့မှာ ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပြောပြရာ ထိုပါရဂူပညာရှင်တို့က အကိုးအကားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ယင်းစွပ်စွဲချက်များကိုရှင်းပြခဲ့သည်။BC6ရာစုခေတ်မှစ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘာသာကိုးကွယ်မှုသမိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာသည် သူ၏ဇာတိမြေတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀ ခန့်တိတိ တည်တံ့ခဲ့သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁ မှ ၈ ရာစုနှစ်များတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာသည် အိန္ဒိယမြေမှလုံးဝပြောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။ ဤသို့ပျက်သုဉ်းရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်း သုံးခုမှာ - ရှင်ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့သော ဘီစီ ၅ ရာစု ကုန်လုနီးကာလအတွင်း ရှင်ဗုဒ္ဓထူထောင်ခဲ့သော ဓမ္မဝါဒီတို့အားကောင်းနေသည်ဖြစ်၍ တလုံးတစည်းတည်းဂုဏ်ရောင်ထွန်းပြောင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဒုတိယသင်္ဂါယနါတင်ပွဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု) နှင့် တတိယ သင်္ဂါယနါတင်ပွဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု)တို့ ကျင်းပချိန်တွင်ဗုဒ္ဓသံဃအဖွဲ့သည် ဂိုဏ်းကွဲ (၁၈) ခုအထိကွဲခဲ့ရသည်။ မူလပင်မအုပ်စုကြီးအသွင်မှ ထေရဝါဒဂိုဏ်း၊ သဗ္ပတ္တိဝါဒဂိုဏ်း၊ မဟာသံယိတဂိုဏ်းကြီးများအဖြစ် အပြိုင်အဆိုင်နယ်ဖြန့်၍ သာသနာပြုခဲ့သည်။ ဤခေတ်တွင် သဗ္ပတ္တိဝါဒဂိုဏ်း နှင့် သံယိတဂိုဏ်းတို့၏အယူဝါဒသည် မူလထေရဝါဒဂိုဏ်းနှင့် သိသိသာသာကွဲပြားသွား၍ အများကြိုက်ဘာသာရေးအသွင် ကူးပြောင်းပုံပျက်သွားကာ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဟူ၍ တသီးတခြားထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုကြည့်ပြီး သတိသံဝေဂရကြစေရန် ဤဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်သည်။မြတ်စွာဘုရားသည် မုန်းတီးမှု၏အကျိုးတရားများကို ကောင်းစွာ သိနားလည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မုန်းတီးမှုဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိတို့၏ ဘဝကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသောသူတို့ကို မြတ်စွာဘုရားမြင်တွေ့တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည်'' မုန်းတီးမှုကြောင့် မုန်းတီးမှုသည် မပြီးဆုံးနိုင် '' '' သင်အမုန်းပွါးလေလေ အခြေအနေပိုဆိုးရွားလေလေ'' ဖြစ်ကြောင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသားမိန့်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။ သင်ကကျွန်ုပ်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုပိုမုန်းလာ၏။ ဤသို့ဖြင့် မုန်းတီးမှုက တဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလာရာ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းမုန်းတီးမှုဟူသော မီးလောင်တိုက်တွင် လောင်မြိုက်ခြင်းခံရသည်အထိဖြစ်၏။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ တဘက်ဘက်က အမုန်းပွါးမှုကို ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရား မြင်တော်မူ၏။တဘက်ဘက်ကဖြစ်စေသို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးကဖြစ်စေ၊ မုန်းတီးမှုကိုမိတ်ဖြစ်မှုနှင့် သို့မဟုတ် ချစ်ခင်မှုနှင့် အောင်နိုင်အောင်မကြိုးစားလျှင် ဤမုန်းတီးမှု အစဉ်အတန်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ဆုံးခန်းတိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ (ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၊ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ခေတ်သစ်ဘဝ၊ စာမျက်နှာ ၅၅-၅၆)ဘုံပျောက်မှာ စိုးကြောက်မိရှာ နောက်ဆက်တွဲ အပိုင်း ၃ဤသို့ဗုဒ္ဓ၏ သံဃာ့ဂိုဏ်းသည် အတွင်းပြိုကွဲမှုများအထပ်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်းအင်အားဆုတ်ယုတ်သွားခဲ့သည်။(၁) သံဃာဂိုဏ်းအတွင်း ဂိုဏ်းငယ်အသီးသီးခွဲထွက်ခဲ့၍ စည်းလုံးသိပ်သီးမှုပြိုကွဲခဲ့ရသည်။(၂) ဗုဒ္ဓမတိုင်ခင်က အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အထင်အရှားရှိနေသော ဟိန္ဒူဝါဒ၊ ဗြဟ္မာဏဝါဒနှင့်ဂျိန်းဝါဒတို့၏ ထိုးနှက်မှုကို အလူးအလှဲခံရခြင်း၊ဘီစီ ၃ ရာစု အတွင်း မောရိယလက်နက်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဧကရာဇ်ဘုရင်အာသောကမင်းကြီး (ဘီစီ ၂၇၃ - ၂၃၂ ခန့်) သည် ဗုဒ္ဓသာသနာကို အလွန်အကျူးချီးမြှောက်ခဲ့ပြီး၊ မောရိယနိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒပြန့်ပွါးရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤခေတ်သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသည့်နောက် ဗုဒ္ဓသာသနာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့သော ခေတ်ဟုဆိုရပါမည်။ (သို့သော် အာသောကမင်းကြီးကို ဆက်ခံခဲ့သော သူ၏မြေးဖြစ်သောမင်းများသည် ဂျိန်းဝါဒီများဖြစ်ကြ၍ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချီးမြှောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မောရိယမင်းဆက်ပျက်သုဉ်း၍ သုင်္ဂမင်းဆက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သော ပုရ်ှမိတြဟိန္ဒူမင်း (ဘီစီ ၁၅၀ - ၁၈၅) သည် ဘီစီ ၂ ရာစု ကုန်လုနီးအတွင်း ဗုဒ္ဓဝါဒီအကြီးအကျယ်နှိပ်ကွပ် ညှဉ်းပမ်းခဲ့သည်။ ရဟန်းကျောင်းများ၊ စေတီပုထိုးများ၊ သာသနိကအဆောက်အအုံများကိုလည်း မီးတိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓရဟန်းတော်အများအပြားတို့သည် အိန္ဒိယပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသမှ ယခုပါကစ္စတန်ရှိရာ ပန်ဂျပ်နယ်မြေကို ပြေးဝင်ခိုလှုံခဲ့ရသည်။ထို့အပြင် ခရစ်နှစ် ၇ ရာစုတွင်အုပ်စိုခဲ့သော ဂုပ်တာနန်းဆက်မှ သလက်မင်းကလည်း ဟိန္ဒူဝါဒကိုမြှောက်စားလို၍ ဗုဒ္ဓဝါဒီများနှင့် သာသနိက ကဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးရုံသာမက မဟာဗောဓိပင်ကိုပါ အမြစ်မှတူးဖြတ်ဖြိုလှဲချခဲ့သည်။ တရုတ်ရဟန်းကြီး ဖာတီယန်အစ်စင်နှင့် ဟိယန်ဆင်တို့၏ မှတ်တမ်းများအရ ဗုဒ္ဓသာသနာသည် ကျယ်ပြန့်ခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘဲ၊ အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့ဘက် ဘင်္ဂလားနယ်၊ တောင်ဖက် ဒက်ခန်ကုန်းမြင့်တဝိုက်၌သာ ကြိုကြားကြိုကြားသာကျန်ရှိတော့ကြောင်း ဆိုထားသည်။(၃) ခရစ်သက္ကရာဇ် ၃ ရာစု အတွင်းက ကသ္မီရနယ်ရှင် ဟန်မင်းဆက်မှ ဟိန္ဒူဘုရင် မဟိရကုလသည် ယနေ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားသော ဂန္ဓာရတိုင်းကို မွှေနှောက်ချေမှုန်းခဲ့ရာ၌ ဗုဒ္ဓဝါဒီအများအပြားကို သုတ်သင်ခဲ့သည်။ ဤ အချက်များသည် သမိုင်း၏ဖျောက်ဖျက်မရနိုင်သော အမှန်တရားများဖြစ်သည်။ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာပေစဉ်များတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။)မူစလင်တမာန်တော် မိုဟာမက်သည် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၅၇၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မိုဟာမက် မမွေးခင်ကပင် ပျောက်ပျက်နေပြီးဖြစ်သည်။ မိုဟာမက် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ လောက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသည် အိန္ဒိယသို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။http://forshwemyanmar.blogspot.com/Myanmar Express
သတင်းထူး ကဏ္ဍ - ၂
၁။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လုယက်မှုကြီး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ တစ်ခြားဟာ လုတာ မဟုတ်ပါဘူး ခမောက်လု ကြတာပါ။ ထို လုယက်မှုက တစ်လ ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ဦးခင်မောင်ဆွေ က ခမောက်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ အရင်တုန်းက ခမောက်ပါတီ၊ ခမောက်ပါတီ ဆိုပြီး နာမည်ကြီးဖို့ဒေါ်စုအပါအဝင် NLD က အမျိုးသမီးအားလုံးက ရေချိုးချိန်နဲ့ အိပ်ချိန်က လွဲပြီး ခမောက် ဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ထမင်းစားရင်တော့ ခမောက်မချွတ်ကြပါဘူး။ အိမ်ထဲရောက်တော့လဲ ခမောက်တွေ ကိုယ်စီနဲ့ပါပဲ။ အဲ့ဒီနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားကို လုံးဝ လက်မခံပဲ NDF ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တဲ့အပြင် ခမောက် တံဆိပ် ကိုပါ ပါတီတံဆိပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာ လုပွဲပြီး စဖြစ်တော့တာပါပဲ။ တင်သွင်းလိုက်၊ ကန့်ကွက်လိုက်နဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ NDF က အနိုင်ရခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီချိန်က စ ပြီး အရင်တုန်းက ထမင်းစားရင်တောင် ခမောက်မချွတ်တဲ့ ဒေါ်စုကြည်က အသက် ၆၅ နှစ် ကျော်မှ စိတ်ကောက်ပြီး ခမောက် လုံးဝ မဆောင်းတော့တာ အခုထိပါပဲ။၂။ အခြေအနေယိုင်နဲ့ပြီး မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရှုံးပါတီများနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး ရစရာမရှိအောင် ပျက်ပြားနေတဲ့ NLD တို့အနေနဲ့ အခုချိန်မှာ အလုပ်ကြီးကြီးမားမား တစ်ခု လုပ်ပြရင်း ပြည်သူလူထုဆီက ထောက်ခံမှုရဖို့ စဉ်းစားနေကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး နတ်ရေကန်ထဲ ပြစ်ချသလို နေ့ချင်းညချင်း တိုးတက်အောင် လုပ်ပြဖို့ အစီစဉ် ရှိပေမယ့်လည်း အရည်အချင်းမရှိတာကြောင့် တစ်လ ကျော်ကြာချိန်အထိ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ ပြည်သူလူထုကလည်း သတိထားမိစ ပြုလာပါပြီ။ ဒီတော့ အခြားပါတီများနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ လက်နက်ကိုင်တွေကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး ပြောနေရပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲရှုံးပါတီများကလည်း သပျစ်သီးကို မစားရတော့မှ ချဉ်တယ်ဆိုပြီး ဒေါ်စုကြည်ဖက်ကိုလှည့်ကာ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဝင်တုန်းက ဝင်ခဲ့ပြီး ရှုံးတော့မှ မတရားကြောင်းတွေ ပြောနေပါပြီ။ ခုလက်ရှိအနေအထားက ပါတီးရှုံးများရော ဒေါ်စုနဲ့ NLD နှစ်ဖက်လုံးအတွက် အကျပ်ရိုက်စေတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီတော့ ဘာမှမလုပ်တတ်မကိုင်တတ်ကို ဖြင်နေချိန်မှာ တစ်ဖက်ကို တစ်ဖက် သံသယလေးတွေနဲ့ ထောက်ခံ မြှောက်ပင့်နေကြပါတယ်။ တစ်ဖက်ဆီက ရလာတဲ့ မြှောက်ပင့်မှုတွေက ကိုယ့်အတွက် မကောင်းဘူးဆိုတာလည်း အချင်းချင်းသိနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နည်းလမ်းမရှိတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ အစိုးရဖက်ကတော့ အစစအရာရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှလုပ်ပြီး အမှားမခံသူဖြစ်သလို မှားတဲ့သူတွေကိုလဲ နားလည်ခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။၃။ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ခင်တုန်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်သင့်ကြောင်း အမျိုးမျိုး အမှန်ပြောကြ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမြင်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြီးမှ ရှုံးတော့ ပါတီအချို့ ၁၀၉၊ ၁၁၀ ဖြစ်နေရပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ငါးမရ ရေးချိုးပြန်မယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမားတို့ရဲ့ အောက်တန်းစားစိတ်အတိုင်း မစားရတဲ့ အမဲကို သဲနဲ့ ပက်ကြတော့တာပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမမျှတကြောင်း အမျိုးမျိုးပြောပြီး အပြင်ကနေ အမျိုးမျိုးဆဲနေကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်တယ်လို့ ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလို အောက်တန်းစား စိတ်ရှိတဲ့ ပါတီတွေနဲ့ အမတ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး နိုင်ငံတော် အာဏာပေးလိုက်ပါက မတွေးဝံ့စရာ.....။၄။ အန်တီညု အန်တီညု ဆိုပြီး ဘုမသိ၊ ဘမသိ လူများရဲ့ အကြောင်းပြချက်မဲ့ အသားလွတ်အထင်ကြီး မြှောက်ပင့်မှုတွေအောက်မှာ ဒေါ်စုကြည်လည်း တော်တော် မြောက်နေပါပြီ။ အဲ့လို မြှောက်တဲ့လူများလေ၊ အမြှောက်ခံရသူက စိတ်ကြီးဝင်ပြီး မြင့်လာလေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အလှမ်းဝေးလေ ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတို့ သတိချပ်သင့်ဖို့ အချိန် ရောက်ပါပြီ....။ အသားလွှတ်မြောက်စရာမလိုပါဘူး၊ အထင်ကြီးစရာမလိုပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အထင်ကြီး၊ ချစ်မြတ်နိုးရင် သွားတွေ့ပါ။ တွေ့ဖို့ စောင့်နေပါတယ်။ အလာပဿလာပါ သွားပြောပါ။ အားနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရောရင်တော့ ၁၅ ပါး ပါ မှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကြီးဝင်နေသူ အနေနဲ့လည်း အလုပ်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပြဖို့ပဲ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်နာမည်ခံပြီး သူများထက် ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးတွေမတွေးနိုင်ဘူး၊ ထိရောက်တဲ့ အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး စောစာစီးစီးပဲ နှစ် ၃၀ ကျော်နေခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် ကိုပဲ ပြန်သင့်ပါတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ အထောက်အပံ့တွေ ညာမစားနေသင့်သလို ကိုယ့်ကို ဘုမသိဘမသိ ထောက်ခံနေသူတွေကိုလည်း ဖြေးဖြေးချင်း ညှင်းပြီး သတ်မနေသင့်ပါဘူး။၅။ လက်တလော နာမည်ကြီး ဝီကီလိခ် က ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ထဲမှာ NLD က အဘိုးကြီးတွေက ပိုးသာကုန် မောင်ပို စောင်းမတတ်ဖြစ်ရကြောင်း၊ အမေရိကန် သံတမန်အနေနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အလွန်စိတ်ပျက်ရပါကြောင်း၊ အလွန်စိုးရိမ်မိပါကြောင်းတွေ ပါလာပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဝီကီလိခ်လည်း ပိတ်သွားပါပြီ။ အပိတ်စောသွားတာ ကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့များ နောက်ထက် ၄ လ လောက် ဆက်ပြီး ဖွင့်ချမယ်ဆိုရင် NLD က အဘိုးကြီးတွေတင်မဟုတ်ပဲ အဘွားကြီး အကြောင်းပါ စိတ်ပျက်ကြောင်းတွေ၊ အသက်ကြီးသလောက် အချိန်မစီးတဲ့အကြောင်းတွေ ပါလာမှာ သေချာပါတယ်။၆။ ဝီကီလိခ် ကြောင့် အမေရိကန်အနေနဲ့ အရှက်ရစေတာကြောင့် ခုဆိုရင် ဆိုက်ဘာကျွမ်းကျင်သူ လူဆိုးများကို ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ပေးထားလိုက်ပါပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ် အင်တာနက်ပေါ်၌ ခုလို ရှက်ဖွယ်လိလိအဖြစ်အပျက်များ မဖြစ်စေရဘူး လို့လည်း တာဝန်ခံ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဝီကီလိခ်ကြောင့် လက်တလောမှာ အမေရိကန် နဲ့ သံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာ နိုင်ငံအားလုံးက သတိထားဆက်ဆံနေကြပြီး ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေကြပါတယ်။၇။ အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်ခါနီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာရင် ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာ အားလုံး စိတ်ဝင်တစား နားစွန့်နေကြတုန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က twitter သုံးချင်တယ် လို့ ပြောလိုက်လို့ ကျွန်တေယ်တို့တောင် အူတက်အောင် ရယ်လိုက်ရပါသေးတယ်။ twitter သုံးခြင်းက လက်တလော မြန်မာလူထုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးနေလား၊ twitter သုံးခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘယ်လို တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းတွေ ကြုံနိုင်လဲဆိုတာ မြန်မာအရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ၃ ယောက်ပေါင်း တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တွေက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေ မဆွေးနွေးခဲ့သေးပါဘူး။ ဘာကြောင့် သုံးချင်တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူမကိုယ်တိုင် လည်း မပြောသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စကားပြောပွဲတိုင်းမှာတော့ သူမ ကို ဝန်းရံကြပါလို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေပါတယ်။ ဒီတော့ twitter သုံးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ စည်းရုံးရေးလုပ်ချင်လို့ပါ။ အမှန်တကယ် အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်အတွက် စည်းရုံးရေး အထူးလုပ်နေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ထောက်ခံဖို့၊ ဝန်းရံဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေတာ၊ twitter သုံးပြီး follow me လုပ်နေတာက သိပ်ကို ညံ့ဖျင်းတဲ့ အပေါစား စည်းရုံးမှု တစ်ခုပါ။ ဒေါ်စုကြည်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု နည်းနေလို့ စကားပြောတိုင်းမှာ သူမကို ဝန်းရံဖို့ အမြဲပြောတာ နဲ့ twitter သုံးဖို့ စိတ်ကူးပေါက်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။၈။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့) သူရဲနီ။ သရဲဆိုလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူရဲမကြီးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အမှန်က ဟုတ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါ။ ယနေ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ အများဆုံး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကလပ် အသင်းကတော့ ပရီးမီးယားလိပ်ခ်က သူရဲနီခေါ် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းပါပဲ။ မန်ယူ အသင်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဘာတွေ တူတာလဲ?? ဆက်ပြောပါမယ်။ လက်တလော မြင်နေရတာတွေပဲ ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံရေးလောက၊ နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာ နဲ့ နိုင်ငံရေး စကားဝိုင်းတွေမှာပဲ ကြည့်ပါ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စား၊ နားလည်တက်ကျွမ်းသူတွေ ထက် ဒေါ်စုကြည်ကို အားပေးထောက်ခံသူတွေက ပိုများနေပါတယ်။ အဲ့လိုပါပဲ အားကစားလောက၊ ဘောလုံးစကားဝိုင်းတွေနဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာလဲ ဘောလုံးဝါသနာရှင်နဲ့ နာလည်သူတွေထက် မန်ယူအားပေးသူ ပရိတ်သက်တွေက ပိုများနေပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အသင်းမို့ နိုင်စေချင်တာ ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးမှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူကို နိုင်စေချင်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက မန်ယူအသင်းကို အရင်က ကြိုက်ပေမယ့် သူ့ပရိတ်သက်တွေရဲ့ မလိုအပ်ပဲ အော်ကျယ်အော်ကျယ် လုပ်မှုတွေကြောင့် မန်ယူအသင်းကို မကြိုက်တော့သူတွေ ရှိသလို ဒေါ်စုကြည် ကို အားပေးထောက်ခံသူတွေရဲ့ မလိုအပ်ပဲ ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ လုပ်မှုတွေကြောင့် ဘေးလူတော်တော်များများက အမြင်ကပ်နေကြပါပြီ။ မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ လူမြင်ကပ်ခံရတာ ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် လုပ်မယ့်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာမှတောင် မဘာရသေးဘူး လူမြင်ကပ်ခံရတာ သိပ်များနေရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒီတော့ ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ ပရိတ်သက်တွေအနေနဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု သတိထားဖို့က မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ စပွန်ဆာ ကောင်းလို့ လူသစ်တွေ ထပ်ဝယ်နိုင်ပြီး အောင်ပွဲခံနိုင်ပေမယ့် ဒေါ်စုကြည်အနေနဲ့ စပွန်ဆာကောင်းတိုင်း လူသစ်ဝယ်ပြီး အောင်ပွဲခံလို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။၉။ လွတ်လပ်မှုအတွက် ခုန်ချခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ပေါ်တင် အလှူခံမှုနဲ့ နာမည်ကြီးလာတဲ့ ဝေနှင်းပွင့်သုန်ခေါ် မွတ်စလင် ဦးမြအေး ရဲ့ သမီးဟာ ခုဆိုရင် ခုန်မချတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့လည်း ယူကေ သတင်းရက်ကွက် တချို့မှာ ပြောနေကြပါတယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း အစိုးရက လွှတ်ထားတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြစရာ မရှိဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတိုင်းထိုင်နေပြန်ရင်လည်း ထောက်ပံ့ကြေးမရမှာ ကြောက်တာကြောင့် မြန်မာကို ဆန္ဒမပြတော့ပဲ တရုတ်ကို ဆန္ဒပြပါတော့တယ်။ ပြမှာပေါ့ သူလည်း မွတ်ဆလင်ကိုး။ ပုံမှာမြင်ရတာကတော့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ ဝေနှင်းပွင့်သုန်က မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ လမ်းတစ်နေရကနေ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီး အော်နေတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူတို့အနေနဲ့ တရုတ်ဆီက အကူညီတွေနဲ့ တိုးတက်သွားရင် သူရဲကောင်း ဝေးနှင်းပွင့်သုန်ရဲ့ ကျးဇူးကို တစ်သက်မမေ့သင့်ပါ။၁၀။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဥပတိရုပ်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ လေးစားဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ သူလည်း ဝေနှင်းပွင့်သုန်နဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်းပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူတို့အတွက် ယူကေ နိုင်ငံရဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ပါးစပ်ဟ ပြီး ၅ မိနစ်တိတိ နေပြခဲ့တဲ့လူပါ။ အဲ့လို စွန့်စားမှုမျိုး မြန်မာပြည်သူတို့အတွက် ဘယ်မြန်မာ သူရဲကောင်းတွေမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူအားလုံးနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူအားလုံးအနေနဲ့ တရုတ်အကူအညီကြောင့် တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိတိုင်းမှာ အံ့သြောလေးစား အားကိုဖွယ် ယူကေရောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမား တွေရဲ့ ကျေးဇူးကို မမေ့သင့်ပါ။၁၁။ လက်တလော ဘလော့ပေါ်မှာ စစ်ကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ဗွီဒီယိုရိုက်ပြလိုက်၊ စစ်ကြီး အတွန့်ရှည်ဖို့ အကူညီတွေ ပေါ်တင်တောင်းလိုက် လုပ်နေတဲ့ လေးစားအားကျဖွယ် ပဂ္ဂိုလ်များပါ။ ၈၈ ကျောင်းသား ဆိုတာ ဒါမျိုးတွေ လားလို့တောင် သံသရ ဝင်ဖို့ကောင်းသလို ၈၈ အရေးအခင်းက ဒီလို ပြည်သူကို ဒုက္ခပေးချင်သူတွေ များလို့ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်း သုံးသပ်မိဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘလော့ပေါ်မှာ အလှူခံလို့ ရသမျှကို ထိုင်းနိုင်ငံထိ သွားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေကို ပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ပွဲကြာရှည်ဖို့အတွက် စစ်တိုက်နေသူတွေကိုပဲ ပေးတာပါ။ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ စစ်ကို လိုလားတဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ ကုလားတွေကို မြန်မာပြည်သူတို့ အထူးသတိထားဖို့လိုပါပြီ။ တောမီးလောင် တောကြာင် လက်ခမောင်ခက်ဆိုတဲ့အတိုင်း တောမီး မလောင် လောင်အောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ လောင်လာပါက တောမီးကြောင့် ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ သတ္တဝါတွေ ကို မကယ်တဲ့အပြင် တောမီးကိုပဲ အတွန့်ရှည်အောင် လုပ်နေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလူတွေ လက်ထဲ အာဏာရောက်သွားပါက မတွေးဝင့်စရာ....။၁၂။ အထူးသဖြင့် အမေရိကားရောက် မြန်မာများက အမေရိကားရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ အားကျပြီး တောသား မြို့ရောက်တဲ့ စတိုင်နဲ့ မြို့ကို ရူးသွပ်သွားကြသလို အမေရိကားကို ခင်တွယ် သွားကြပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံရောက် မြန်မာများလဲ အတူတူပါပဲ။ တစ်ခုခု တွေ့တာနဲ့ ငါတို့နိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးမရှိဘူး၊ အဲ့ဒါ အစိုးရမကောင်းလို့ ဆိုပြီး ဘာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရကို အပြစ်တင်ကြပါတော့တယ်။ ကိုယ်တိုင်က လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် အရွယ်ကောင်းကြီးနဲ့ သူများနိုင်ငံ ကျွန်ခံကာ သူများအကျိုးလုပ်နေပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုး ကို အစိုးရက မလုပ်ဘူးဆိုပြီး အပြစ်တင်ပါတော့တယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ မြန်မာရဲ့ စီးပွားရေးကို နှိုင်းယှဉ်ဖို့ သတိရကြပေမယ့်။ အမေရိကန် နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ မြန်မာ ပညာတတ်တွေ အများကြီး လုပ်ပေးနေတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မတိုးတက်ဖို့ အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့ထားတာကိုတော့ သူတို့တွေ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်နေကြပါတယ်။၁၃။ ၂၀၁၀ နှစ်းဆန်းပိုင်းကတည်းက ပညာရှိ အတွေးအခေါ်ရှင် နိုင်ငံရေး သမားတို့ ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မှာ လက်ရှိအစိုးရ ကျဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေက ခုဆိုရင် နှစ်ကုန်ဖို့ ရက်ပိုင်း လိုတဲ့အထိ ဘာမှ ဖြစ်မလာပါဘူး။ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ထိုင်ခံက ပိုပြီးတော့တောင် ခိုင်မာလာပါသေးတယ်။ X2O, H2O, ၂၀၁၀ မှာ လက်ရှိအစိုးရ ကျဆုံးမယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကောက်ချက်တွေကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ်လုပ်ခဲ့ကြသူတွေကတော့ ခုချိန်မှာ မသိသလိုပဲ အရှက်မရှိ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ဆက်လက်ခန့်မှန်းတုန်းပါပဲ။၁၄။ ၂၀၁၀ တုန်းက ဒေါ်စုကြည်က ဗူးသီးပေးလိုက်လို့ ဥာဏ်ကြီးရှင် နိုင်ငံရေးသမားတို့ အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပါယ်တွေ ကောက်ပြီး အထိန်းအမှတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘူးသံချပ်၊ ဘူးမဏ္ဏပ် နဲ့ ဗူးသီးကြော် ကြွေးတဲ့အထိ ပေါ တောတော နိုင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ အပေါဆုံး လုပ်ရက်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူတို့လုပ်သမျှ ဘာမှလည်း ဖြစ်မလာပါဘူး။ ဘာလုပ်လုပ် မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီတော့ ၂၀၁၁ မှာတော့ ဗူးသီးအစား ဒေါ်စုကြည်အနေနဲ့ လက်စွဲတော် ခရမ်းသီး ပေးလိမ့်မယ်လို့ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူတို့က ခန့်မှန်းထားပါတယ် မြန်မာအတိုက်အခံများအနေနဲ့လည်း ခရမ်းလှုပ်ရှားမှုအတွက် သံချပ်များ ကြိုတင်တိုက်ထားကြပြီး ဖြစ်တယ်လို့လဲ နှစ်စဉ် ပေါတောတော သံချပ်များ သီဆိုလျှက်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး သတင်းရက်ကွက်က ရပါတယ်။သမိုင်းဝင်မယ့် လှုပ်ရှားမှု မှတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲ။ အသက်တွေရလာပြီး ခလေးတွေ မွေးလာချိန်မှာ ခလေးတွေက ”ဖေကြီးက နိုင်ငံရေး သမားဆိုတော့ ဘယ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဝင်ခဲ့လဲ” လို့မေးရင် သမိုင်းဝင် ဘူးလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဖြေယုံပါပဲ။၁၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့အနေနဲ့ သံဃာတစ်ပါးကို ဆွမ်းလောင်းလှူချင်လို့ သော်လည်းကောင်း၊ ဆွမ်းကပ်ချင်လို့ သော်လည်းကောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ကို သွားပြီး ရိုရိုသေသေ လျှောက်ထားရပါတယ်။ ခေတ်တွေ ဘယ်လောက် ပြောင်းပြောင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုက ဘယ်တော့မှ မပြောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ခေတ်မှာ မမြင်ဖူးတာ တော်တော်များများကို မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ ဒီနေရာ နဲ့ ဒီနေရာ တွေမှာ ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခုလည်း ဘုန်းကြီးများကို ဆွမ်းခံကြွဖို့ လမ်းဘေး သစ်ပင်တွေမှာ စာရွက်ကပ်ခေါ်တဲ့ အနေအထား ရောက်နေပါပြီ။၁၆။ သံဃာ ဖြစ်ပြီး သံဃာ အလုပ်မလုပ်သူတွေကို နိုင်ငံရေးသမားတို့ အင်မတန် အထင်ကြီးလေးစားကြတဲ့အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ သံဃာနဲ့ သူ့ ဒါရိကာမ နဲ့တော့ ဟုတ်နေတာပါပဲ။၁၇။ နောက်ထပ် အတိုက်အခံတို့ လေးစားတဲ့ သူတွေကတော့ အနုပညာရှင်တွေက အနုပညာ အလုပ်မလုပ်တဲ့ သူတွေပါပဲ။ တစ်ဖြစ်သည်းတတ်တဲ့ ပရိတ်သက်နဲ့ အပိုလုပ်ပြချင်တဲ့ မင်းသားနဲ့တော့ တော်တော်လိုက်ပါတယ်။ အများကောင်းမှုဆိုတာ လူတိုင်း တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ လုပ်နေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မုတ်ဆိပ်ဖြူတွေ အရှည်ကြီးထားရ၊ ဝတ်စုံဖြူကြီး မချွတ်ရနဲ့ လူတွင်ကျယ်လုပ်ချင်စိတ်တွေ သိပ်များလွန်းနေပါတယ်။ မွေးကတည်းက ခုလိုနေလာတယ် ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပါ။ တစ်ချိန်က မင်းသားလုပ်ခဲ့၊ ကိုယ်ရည်သွေးခဲ့၊ မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းခဲ့ပြီးမှ ခုမှ အတိတ်မေ့သလိုလို၊ ရွှေပျောက်သလိုလို လုပ်နေပါပြီ။ ကောင်းတာလုပ်တာလဲ လုပ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ သက်တူရွယ်တူ မင်းသား အားလုံး နုပျိုပြီး ကြည့်ကောင်းနေသလို အများကြီး ပြင်ဆင်ဖို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သာမန်လူထဲက လူတစ်ယောက်လိုပဲ နေထိုင် ဝတ်စား လို့ရပါတယ်။ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဆိုရင် ပိုတောင် ကြည့်ကောင်းပါအုံးမယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒေါ်စုကြည်ကို ရူးသွပ်သူတိုင်းက တစ်ခု မဟုတ်တစ်ခုတော့ လွတ်နေကြတာပါပဲ။၁၈။ နောက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ မြန်မာ့အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မွေးပြီး မြန်မာ စကား သင်ပေးထားတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာ မြန်မာလူထုအတွက် ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို စကားတွေပါ။ မြန်မာလူထုကို ပြောချင်တဲ့ စကားတွေကို ဘာကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို ပြောခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ ဘယ်လိုနားလည် စဉ်းစား ပေးရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။ Myanmar Express
ပြည်တွင်းက ပညာတတ်တွေ နိုင်ငံခြားထွက်သွားပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြင် အယူအဆ အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်။ တချို့ကဒါဟာ ဦးနှောက်ယိုစီးမှု(brain drain) ဖြစ်တယ်။ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ရတဲ့ မိခင်နိုင်ငံအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားကြတယ်။ပိုဆိုးတဲ့ ပြဿနာဦးနှောက်ယိုစီးမှုထက်ဆိုးတဲ့ ဦးနှောက်ခြောက်ခန်းမှု (braindry) ပြဿနာလည်း ရှိသေးတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဆရာဝန် ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်မလုပ်ဘဲ ကုမ္ပဏီထောင် စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါ၊ အထည်အလိပ် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရက သင်္ဘောသား သွားလုပ်တဲ့အခါ၊ ဘူမိဗေဒဘွဲ့ရက ဆေးကုမ္ပဏီရဲ့ ဆေးရောင်းသမား သွားလုပ်တဲ့အခါ သူတို့ သင်ယူခဲ့တဲ့ ပညာတွေ မေ့လျော့ ခြောက်ခန်းသွားပြီး အဟာသိကံ ဖြစ်ရတယ်လို့ ရေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒီပြဿနာမျိုးဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များတဲ့အတွက် တိုးတက်မှု နောက်ကျမှုဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပြီး ဆိုးလာတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံကြီးတွေမှာ ဒီပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး အ တွက် အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေ့အထိ အဖြေရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူး။ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့ အထက်မြက်ဆုံး ဦးနှောက်တွေကို အချောင်ရနေတဲ့အတွက် မှိန်းပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြတယ်လို့ စွပ် စွဲသံတွေလည်း ကြားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြတ်တနိုး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေရတဲ့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာရပ်များဟာလည်း ယိုးဒယား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ စတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေနဲ့ ကူးလူးယှက်နွှယ် နေခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒီခေတ်ဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ချည်းသက်သက် တံခါးပိတ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး . . . လွယ်လွယ်နဲ့ ထွက်ခွင့်မပေးဒီနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးမှ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံမှာ နစ်နာတယ်လို့ မြန်မာဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က ယူဆခဲ့တယ်။ အဲဒီယူဆချက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံခြားထွက်ခွင့် လွယ်လွယ်နဲ့ မပေးခဲ့ဘူး။ FRC ကိုင်ထားပြီး အပြီးပြန်တော့မယ့် ''ဖော်ဂွတ်'' (For Good) သမားတွေပဲ အသွားများတယ်။ မြန်မာလူမျိုးများ အတွက်တော့ လွယ်လွယ်နဲ့မထွက်နိုင်အောင် ဘွဲ့နဲ့ဒီပလိုမာအတွက် ပညာရေးလျော်ကြေး ကောက်ခံတဲ့စနစ် စတင်တီထွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ တယ်။ ဒီနေ့အထိ ဒီစနစ် ရှိနေသေးတယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ အစိုးရကလွှတ်တဲ့ ပညာတော်သင်နဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေလောက်ပဲ နိုင်ငံခြား အသွားအလာ ရှိကြတယ်။ ဒီခေတ်လို ရှော့ပင်းထွက်တယ်ဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးကြဘူး။၀ါးလုံးခေါင်းထဲက ထွက်ကြပညာတတ်တွေ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တာဟာ နိုင်ငံအတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု မဟုတ်ဘူး။ အမြတ်တောင် ထွက်သေးတယ်လို့ ယူဆသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် အထူးလိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ ရှာ ပေးတာဖြစ်လို့ တားဆီးပိတ်ပင် မလုပ်သင့်ဘူးလို့ သူတို့ကဆိုတယ်။ သီရိလင်္ကာ၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွေဟာ နိုင်ငံခြားသွား နိုင်ငံခြားက ပြန်ပို့တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ သန်းရာပေါင်းများစွာ ရရှိနေတာကို ထောက်ပြကြတယ်။ ကမ္ဘာရွာခေတ်မှာ ၀ါးလုံးခေါင်းထဲက ထွက်ကြပါလို့လည်း သူတို့က တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတယ်။အရေးကြီးလိုလိုမကြာမီလေးကပဲ မန္တလေးက စာတစ်စောင်ရတယ်။ အငြိမ်းစားဘီအီး (စက်မှု)အင်ဂျင်နီယာကြီး တစ်ယောက်ဆီကပါ။ သူမြင်တဲ့''ဘရိန်းဒရိန်း''ကတော့ တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရပြီး အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ ရာထူးကြီး ယူထားပေမယ့် တကယ် လက်တွေ့ကျတော့ စာရင်းအင်းတွေ စာရွက်တွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေရတဲ့ စာရင်းကိုင်လိုလို၊ ရုံးအုပ်စာရေးကြီးလိုလို ဖြစ်နေတာကမှ အမှန်တကယ် ''ဘရိန်းဒရိန်း'' ဖြစ်တာပါတဲ့။ဘရိန်းဂိန်းနိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် ပိုပြီး မျက်စိပွင့်နားပွင့် ဖြစ်လို့ ''ဘရိန်းဂိန်း'' (brain gain) ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်တဲ့။ ဆက်ပြီးသူက တိန့်ရှောင်ဖိန်ရဲ့လုပ်ရပ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ပြောထားသေးတယ်။ တိန့်ရှောင်ဖိန် အာဏာပြန်ရ တဲ့အခါမှာ ပညာထူးချွန်တဲ့ လူငယ်တွေကို အမေရိကနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေဆီ ပညာသင်လွှတ်တယ်။ တခြားသူတွေက ဒီလူတွေပြန်မလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ မေးတော့ ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ ပြန်ဖြေတယ်။ လက်တွေ့မှာလည်း အတော်များများ ပြန်မလာဘဲ ဟိုနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြပြီး တချို့က ဟိုနိုင်ငံသားအဖြစ်တောင် ခံယူလိုက်ကြတယ်။ပါရဂူတွေအများကြီးဒါပေမယ့် တံခါးဖွင့် စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးလိုက်လို့ စီးပွားရေး တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက်သွားတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီလူတွေ အများကြီး ပြန်လာကြတယ်တဲ့။ အဲဒီထဲမှာ ပါရဂူဘွဲ့ရ ပညာရှင်တွေလည်း အများကြီး ပါလာတယ်။ တချို့ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင် (expatriate) အဖြစ် တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ လခကောင်းကောင်းနဲ့ ၀င်လုပ်ကြသတဲ့။ ဒါတော့ ဟုတ်တယ်။ ရှစ်ဆယ်ခုနှစ်တွေ အတွင်းက FRC တပည့်တွေ အများကြီး အဲဒီအချိန်က တရုတ်(တိုင်ပေ)ကို ဖော်ဂွတ်ပြန်သွား ကြတယ်။ အခု ဒီဘက်ပိုင်း နှစ်တွေကျတော့ သူတို့ထဲက တချို့ဟာ ပေကျင်းတို့ ရှန်ဟိုင်းတို့မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြညမန္တလေးက အငြိမ်းစား အင်ဂျင်နီယာကြီးကတော့ ပညာတတ်တွေ နိုင်ငံခြား ထွက်သွားတဲ့အတွက် (၁) အတွေ့အကြုံနဲ့ ပညာအရည်အချင်း တိုးတက်တယ် (၂)မိသားစု စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေတယ်။ (၃)တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ ရစေတယ်။(၄) ထွက်သွားသူတွေနေရာမှာ နောက်လူတွေ အလုပ်ရလို့ အလုပ်လက်မဲ့ လျော့နည်းစေတယ်လို့ နံပါတ်စဉ်ထိုးပြီး ထောက်ခံအားပေးသွားပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာ ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်ကို အင်မတန်ခင် တွယ်တတ်သူတွေ ဖြစ်လို့၊ တစ်နေ့နေ့ကျရင် မြန်မာပြည်ကို ပြန်မလာဘဲ မနေပါဘူးလို့လည်း သူကယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့ တပည့်တွေ ရာပေါင်းများစွာနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်တာကြောင့် ဒီအချက်ကိုတော့ သဘောတူတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတို့အားလုံး ပြန်လာကြမယ်ဆိုတာ စိတ်ချယုံကြည်တယ်။နယ်ပယ်ကျဉ်းလွန်းလို့နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ကျောင်းဆရာ လုပ်ခဲ့ရာမှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အများစုက မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်လူမျိုး ဖြစ်ကြတယ်။ တချို့ဆို တရုတ်စကားတောင် မတတ်ကြဘူး။ ဆိုရှယ်လစ် စကားလုံးတွေ လူတိုင်းရွတ်နေတဲ့ ခေတ်မှာ လုပ်ကိုင်စားစရာ နယ်ပယ်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းလို့သာ သူတို့သွားကြတာ ဘယ်သူမှတော့ သွားချင်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တွေ မဆိုထားနဲ့ သူတို့လို မြန်မာပြည် ပေါက်တရုတ်တွေနဲ့ အိန္ဒိယသားတွေတောင် မြန်မာပြည်အကြောင်း ပြောရင် မျက်ရည်မ၀ဲဘဲ မနေနိုင်ကြပါဘူး။ အခွင့်သာတဲ့ တစ်နေ့မှာ သူတို့ပြန်လာကြမှာပါ။ဘာကြောင့် သေချာတာလဲ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို ပြန်လာမှာပါလို့တောင် ပြောရဲတယ်။ ဘာကြောင့် ဒါလောက် သေချာနေရတာလဲလို့ မေးရင် မြန်မာစကား မတတ်တဲ့လူတွေတောင် ပျော်လွန်းလို့ ကုတ်နဲ့ကော်ထုတ်တောင် မပြန်ချင်တော့တာတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက် ချင်တယ်။ မြန်မာပြည်မွေး၊ မြန်မာပြည်မှာကြီးပြီး မြန်မာစကား တစ်မျိုးတည်းသာ ပြောတတ်သူတွေ ပြန်မလာဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ပြန်လာတဲ့အခါ တချို့ စုမိဆောင်းမိတာလေးတွေ ပိုက်ပြီး ပြန်လာကြမယ်။ တချို့က ပညာရှင်တွေ ပါရဂူတွေ ဖြစ်ပြီး ပြန်လာကြမယ်။ တချို့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ အဖြစ် ပြန်လာကြမယ်။ လက်ချည်းသက်သက် ပြန်လာဖူးသူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ကူးလူးယှက်နွှယ်ဘယ်လိုနည်း ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲ ပြန်လာလာ၊ တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့ အကျိုးရှိတာပါပဲ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ပညာရပ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတတွေ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ ဖြည့်ဆည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြတ် တနိုး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေရတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာရပ်များဟာလည်း ယိုးဒယား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ စတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေနဲ့ ကူးလူးယှက်နွှယ် နေခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာ လို ဖြစ်နေတဲ့ ဒီခေတ်ဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ချည်း သက်သက် တံခါးပိတ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ တံခါးတွေ ဖွင့်ထားမှ အခန်းထဲက လေဆိုးလေပုပ်တွေ လွင့်စင်ထွက်သွားပြီး ပြင်ပက လေကောင်းလေသန့်တွေ ၀င်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။လူထုစိန်ဝင်းMyanmar Express
ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ (၃)
မင်္ဂလာပါ မစု။ မစုလို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းတာကို စာဖတ်ပရိသတ် အချို့က ဒါဟာ မရိုမသေ ခေါ်ဝေါ်တာ ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန် ပြောဆို လာကြပါတယ်။ ကျွန်တော့် အစ်မအကြီးဆုံး ဒေါ်ညိုဟာ မစုထက် တစ်နှစ်ကြီး ပါတယ်။ အစ်မကြီး ဒေါ်ညိုကိုလည်း ကျွန်တော် မညိုလို့ပဲ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မစုထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၁)နှင့် ''အမြန်ဆုံး ရုန်းထွက် လိုက်ပါတော့လား'' ဆောင်းပါးများကို ရေးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အချိန်တုန်းက မစုဟာ နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေထိုင်နေရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ မစုကို ကရုဏာ ပိုခဲ့မိပြီး မစုလို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာတွေထဲမှာ "မစုရေ" "မစုရေ" လို့ စာပိုဒ်ရဲ့ အစတိုင်းမှာ နွေးထွေးစွာ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မျက်စိအောက်က ပျောက်သွားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် အစ်မကြီး တစ်ယောက်ကို စကားပြော တတ်ကာစ မောင်ငယ်လေး တစ်ယောက်က တစာစာ တမ်းတခေါ်နေတဲ့ သဘောပါပဲ။ နောက်ပြီး မစုဟာ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးရဲ့ သမီး ဖြစ်တာကြောင့် အစ်မရင်း တစ်ယောက်လို သဘောထားခဲ့ မိပါတယ်။ ခု မစု လွတ်မြောက် လာချိန်မှာ ဒေါ်စုလို့ မခေါ်ချင်တော့ ပါဘူး။ ဟိုအရင်တုန်းက မစုအပေါ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြင်နာ၊ ကရုဏာ စိတ်တွေဟာ ခုထက်ထိ ရှင်သန်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် မစုလို့ပဲ ဆက်၍ ခေါ်ခွင့်ပေးဖို့ အနူးအညွတ် မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- နိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တုန်းက မစုတို့ ရုံးရှေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ရှင်းလင်း တင်ပြပါရစေ။ နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂)နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်ဟာ မစုထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တစ်စောင် မော်နီတာ ဂျာနယ်ပါ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး နှစ်ပုဒ်၊ သတင်းစာပါ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး (၄) ပုဒ် တို့ကို မစု ဖတ်နိုင်ဖို့ အတွက် မစုတို့ ရုံးချုပ်ရဲ့ စာပေးစာယူမှာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထိုးပြီး ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာအိတ်ပေါ်မှာ "သို့/ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" "မှ/ ငါးမင်းဆွေ" လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မစုဟာ ရုံးချုပ်ရဲ့ အောက် ထပ်မှာ စည်းဝေးပွဲ လုပ်နေပါတယ်။ မစုကို ကျွန်တော် လှမ်းမြင်နေရ ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦး တင်ပြပြောဆို နေတာကိုလည်း တွေ့မြင် နေရပါတယ်။ မစုကို အနီးကပ်တွေ့ချင် မြင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြ နေတာကြောင့် (၁၀) မိနစ်ခန့် မစုမျက်နှာကို ငေးမော ကြည့်ရှုပြီးမှ မစုတို့ ရုံးချုပ်ကနေ ကျွန်တော် ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ကျွန်တော် ကားမောင်းနေတုန်း ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ ဖုန်းဆက်သူက သူဟာ NLD ရုံးချုပ်က ဦးဝင်းထိန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ သူက ခင်ဗျားရဲ့ ပေးစာကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထံ မတင်ပြနိုင်ကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ "ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်စုကြည်သို့ (၂)" လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာကို မကြိုက်ကြောင်း "ဒေါ်စုကြည်" မှာ အမည်ရင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" လို့သာ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ ကျွန်တော်က ၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက သတင်းစာထဲမှာ "ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်စုကြည်သို့" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသားခဲ့ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ယခုလည်း "ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်စုကြည်သို့ (၂)" ဟု ရှေ့နောက် လျှော်ညီအောင် ရေးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်ပေးသော ဆောင်းပါး အပုဒ်တိုင်းရဲ့ ထိပ်မှာ "အစ်မကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သို့ ရိုသေစွာဖြင့် အမှတ်တရ" လို့ ရေးသားပြီး လက်မှတ်ရေးထိုး ထားပါကြောင်း၊ အစ်ကိုကြီးက "ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်"လို့ ပြင်စေလိုလျှင်လည်း ကျွန်တော် ပြင်ပေးပါမယ်။ ဒီလိုပြင်လိုက်လျှင် ကျွန်တော့်စာကို ပို့ပေး နိုင်မှာလားဟု မေးရာ ဦးဝင်းထိန်က မပို့ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ခင်ဗျား စာထဲမှာ မှားယွင်းမှု အချို့ ပါရှိနေကြောင်း ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ရေးတဲ့ စာတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ ထဲမှာ မှားတာရှိလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က လူသိရှင်ကြား ဝေဖန် ထောက်ပြပေးပါလို့ ရေးထားကြောင်း၊ မှားတာမှန်တာ ဆုံးဖြတ်ရမည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဦးဝင်းထိန်က ဒီစာကို ဘယ် နည်းနဲ့မှ မတင်ပေး နိုင်ကြောင်း ပြန်ပြောပါတယ်။ ဒီစာကို မတင်ပေး နိုင်ရင်လည်း ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ သတင်းစာနဲ့ ဂျာနယ်များပါ ဆောင်းပါးများကို တင်ပေးပါဟု ပြောရာ ဦးဝင်းထိန်က မတင်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒီလို ဦးဝင်းထိန်ရဲ့ ပြောကြားချက် များကြောင့် ဦးဝင်းထိန်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို နားမျက်စိ ပိတ်နေသူဟု ကျွန်တော် ခံစားထင်မြင်မိခဲ့ ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား---- ထိုနေ့ညနေမှာပဲ ရပ်ကွက်တွင်းရှိ စတိုးဆိုင်မှ တီရှပ် အဖြူတစ်ထည်နှင့် ဆော့ပင်အနီ တစ်ချောင်းတို့ကို ဝယ်ပြီး ဘာတာမှတ်တိုင် အနီးရှိ ပန်းချီဆရာ တစ်ဦးအား တီရှပ်ပေါ်တွင် "ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို နားမျက်စိ မပိတ်ပါနဲ့၊ မော်နီတာ ဂျာနယ်မှ ငါးမင်းဆွေ၏ မေတ္တာလမ်းစဉ် မှတစ်ပါး အခြားမရှိပါ ဆောင်းပါးကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သို့ ပို့ပေးပါ" လို့ ရေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သတင်း ဂျာနယ်တိုက် (၄)ခုသို့ ဖြစ်ပျက်သည့် အကျိုးအကြောင်းကို ပြောပြပြီး မနက်ဖြန် နေ့လည် (၁၁ )နာရီတွင် မစုတို့ ရုံးချုပ်သို့ သွားပြီး ဦးဝင်းထိန်နှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ သတင်းဂျာနယ် အချို့ကို သတင်း ပေးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ခေါ်ယူခြင်း မလုပ်ခဲ့ပါ။ ခေါ်ပိုင်ခွင့်လည်း ကျွန်တော့် တွင် မရှိပါ။ နောက်နေ့ နေ့လည် (၁၁) နာရီတိတိ အချိန်မှာ ကျွန်တော် မစုတို့ ရုံးချုပ်ရှေ့သို့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရုံးရှေ့မှာ ကားတွေ ပိတ်နေတာကြောင့် ရုံး တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ လဖက်ရည် ဆိုင်ရှေ့မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆန်နီပစ်ကပ် ကားကို ရပ်လိုက် ပါတယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး မစုတို့ ရုံးရှေ့ကို တိုက်ရိုက် လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံးရှေ့ရောက်တော့ သတင်းထောက် တစ်ဦးက ဒီရုံးရှေ့ကို ဘာကြောင့် လာရကြောင်း မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က အထက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း မနေ့က ဖြစ်ပျက်တဲ့ အဖြစ်အပျက် အားလုံးကို ပြောပြပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ စာနဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဒီရုံးမှ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဖြစ်သူ ဦးဝင်းထိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထံသို့ တင်ပေးနိုင်ပါရန် အတွက် ဦးဝင်းထိန်နဲ့ တွေ့ဆုံရန် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလို ရှင်းပြတဲ့ နေရာမှာ ရောက်နေတဲ့ သတင်းထောက် အားလုံး ကြားနိုင်ရန်နဲ့ အသံသွင်းစက်ထဲ အသံ ကောင်းမွန်စွာ ဝင်နိုင်ရန် နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောသော အသံထက် အနည်းငယ် ကျယ်သော အသံဖြင့် ပြောဆို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပါလာတဲ့ မော်နီတာ ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါး နှစ်ပုဒ်နှင့် ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သို့ (၂) အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တို့ကို ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တွေကို ပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ မစုတို့ ရုံးအဖွဲ့မှ တိုက်ပုံ ဝတ်ထားတဲ့ အသက်ကြီးပိုင်း တစ်ယောက်က ဦးမင်းဆွေ ဘာဖြစ်ချင် သလဲလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ရဲ့ စာနဲ့ ဆောင်းပါးများကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထံသို့ ပို့ပေးနိုင်ရန် ဦးဝင်းထိန်နဲ့ တွေ့ဆုံ လိုပါကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တွေ့ပြီး မနေ့က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် များကို ရှင်းပြလိုပါကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က သတင်း ပို့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေတ္တ စောင့်ရန် ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရုံးထဲမှာ ဝင်စောင့်ဖို့ ရုံးနယ်နိမိတ်ကို ခြေတစ်လှမ်း ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်ကို လက်နဲ့တားပြီး အပြင်မှာ စောင့်ရန် ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းထိန်တို့ကို တွေ့ဆုံရန် လာရောက်တဲ့ ပြည်သူ တစ်ယောက်ကို ရုံးထဲဝင်ပြီး စောင့်ဆိုင်းခွင့် မပြုတာ အလွန် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးမင်းဆွေ ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ဝေဖန် ခဲ့တာကြောင့် အငြိုးအတေး အာဃာတကြီးစွာ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆက်ဆံလိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- ကျွန်တော် ငါးမင်းဆွေဟာ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများက နေပြီး မစုကို ဝေဖန် ထောက်ပြတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက မစုဟာ နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် ခံထားရတာမို့ မစုဘက်က ကျွန်တော် ရေးတာတွေကို ပြန်လည် ဝေဖန် ထောက်ပြခွင့် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ယခု မစု လွတ်မြောက်လာချိန်မှာ ကျွန်တော် မစု အပေါ် ရေးသားခဲ့တာ တွေဟာ ဘာတွေများ မှားနေပါ သလဲလို့ လူသိရှင်ကြား ဝေဖန် ထောက်ပြပေးဖို့ သတင်းဆောင်းပါး အချို့ကို လာပေးတာပါ။ ဒါဟာ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆို ဝေဖန်နိုင်မှုပါ။ ဒါဟာ တရားမျှတတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ ဒါဟာ မစုတို့ ပြောပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တစ်ခု ပါ။ ဒီလို ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် အညီ ကျွန်တော့် ဆောင်းပါးများကို ဝေဖန် ထောက်ပြ နိုင်ပါရန် လာပေးတာကို မစုထံ မတင်ပြခြင်း၊ ထိုသို့ မတင်ပြခြင်း အတွက် မိမိ ခံစားရသည့် ခံစားချက်ကို မိမိ အင်္ကျီပေါ်တွင် ရေးပြီး မတင်ပေး နိုင်ဘူးဟု ပြောဆိုသူ ဦးဝင်းထိန်နဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ရန် အေးအေးဆေးဆေး လာရောက်သူကို ရုံးအတွင်း ဝင်ထိုင်စောင့်ခွင့် မပြုဘဲ အပြင် ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် တစ်နာရီလောက် မတ်တပ်ရပ် စောင့်ခိုင်းထားခြင်း တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီကို စော်ကားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- မစုရုံးရှေ့မှာ ထိုင်ခုံ မရှိပါဘူး။ ရုံးရဲ့ လမ်းတစ်ဖက်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ကားထဲထိုင် စောင့်နေ ပြန်ရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို တွေ့ဖို့ ခေါ်လျှင် လိုက်ရှာနေရမှာ စိုးလို့ရယ်၊ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေတာကြောင့် ရုံးရှေ့မှာပဲ မိုးတိုးမတ်တပ်နဲ့ ခေါ်နိုးခေါ်နိုး တစ်နာရီလောက် စောင့်နေရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်က များလွန်းတာကြောင့် မတ်တပ် မရပ်နိုင်တဲ့ အဆုံး လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းမှာ ဖင်ထိုင်ချခဲ့ ရပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ် ကနေ ယခု ထက်ထိတိုင် နှစ် (၃၀) လုံးလုံး မြန်မာနိုင်ငံ ဆားထုတ်လုပ်သူ အကြီးဆုံး (၁၀) ဦးမှာ တစ်ဦး အပါအဝင် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ခွင့်ရဖို့ အတွက် ဒီတစ်ခါပဲ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်ခဲ့ရဘူး ပါတယ်။ မပြောကောင်း ပြောကောင်း ပြောရလျှင် ဆားလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ငါးမင်းဆွေဟာ မစုတို့ ရုံးရှေ့မှာ လမ်းဘေး သူတောင်းစား တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ခွက်စုတ် တစ်လုံးသာ လိုတော့တဲ့ အဖြစ်သို့ ရောက်ခဲ့ရပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- အဲဒီနေ့က ဦးဝင်းထိန်နဲ့သာ တွေ့ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ မစုနဲ့ တွေ့ခွင့် မရခဲ့ပါ။ မစုနဲ့ ၅ မိနစ်လောက်တောင် တွေ့ဆုံ ရှင်းလင်းပြခွင့် မရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်က မစုကို ရှင်းလင်း ပြောဆို ချင်တာကို မပြော နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ရှုံးဆုံးသလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လို ဖြစ်ကြတာလဲလို့ ဦးဝင်းထိန် ပြောတာရော၊ ကျွန်တော် ပြောတာရော မစု နားထောင်သင့် ပါတယ်။ ဒါမှသာ မစု အမှန်ကို မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ မျှတမှု ရှိပါလိမ့် မယ်။ အဲဒီနေ့က မစု ကျွန်တော့်ကို ခတ္တ ခဏလောက်တောင် ထွက်မတွေ့ နိုင်ခြင်းဟာ တစ်ကယ်လို့ မစုက ကျွန်တော့်ကို ထွက်တွေ့လိုက်လျှင် ပြည်တွင်းဂျာနယ် သတင်းထောက်တွေက စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ငါးမင်းဆွေ ရေးထားတာကို ဒေါ်စု ဘယ်လို ဖြေမလဲလို့ မေးခဲ့ကြလျှင် မစု အနေနဲ့ ငြင်းရလည်းခက်၊ ဝန်ခံရလည်းခက် ဆိုတဲ့ ဘေးကြပ်နံကြပ် အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်နေတဲ့ အတွက် ဒီလို ထွက်မတွေ့ရဲ တာလို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ်။ မစုကို အိတ်ဖွင့်စာ ပို့ပြီးတာ (၁၀) ရက်ကျော်ကြာတဲ့ အထိ မစုဘက်က ယနေ့ထက်တိုင် ကျွန်တော် မေးထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသံမှ ထွက်မလာ သေးတာကို ကြည့်လျှင် ကျွန်တော် ထင်မြင် တာတွေဟာ ပိုပြီး ခိုင်မာလာရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မစု တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ စီးပွား ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာ အကြမ်းဖက်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကို မစု သတ္တိရှိရှိ ရှင်းလင်း ပြောကြား လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်နေဆဲပါ မစု။မစု ခင်ဗျား--- မစုတို့ ရုံးရှေ့ကို သွားခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၂၅ )ရက်နေ့ ညနေပိုင်း VOA အစီအစဉ် ကနေပြီး စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများမှာ ဆောင်းပါးရေးတဲ့ ငါးမင်းဆွေဟာ NLD ရုံးချုပ်ရှေ့သွားပြီး သူ့ဆောင်းပါးတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖတ်ဖို့ အောင်ဟစ်ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒီလို လုပ်ရပ်ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ပိုမို စိုးရိမ် လာရတယ်ဟု ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီပြောဆိုမှုဟာ လုံးဝမှားယွင်းတဲ့ ပြောဆိုမှု ဖြစ်ပါတယ် မစု။ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ပေးစာနဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို မစုထံ မပေးပို့ တဲ့အတွက် ဒီလို မပေးပို့နိုင်တဲ့ ဦးဝင်းထိန်နဲ့ တွေ့ဆုံရန် မစုတို့ ရုံးကို တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေ မေးသလောက်ကိုသာ ဖြေပြီး မစုတို့ ရုံးက တာဝန် ရှိသူတွေက ရုံးထဲပေးမဝင်လို့ ရုံးအပြင် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ရပ်စောင့်နေရခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်ဟစ်ဆန္ဒပြ ရမ်းကားခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒါတွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက်တွေက အသံသွင်းခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ဗီဒီယို ရိုက်ခြင်းများ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပ အသံလွှင့် ဌာနက သတင်းထောက်တွေ ရှိနေပါလျှက် ကျွန်တော် အော်ဟစ် ဆန္ဒပြခြင်း မရှိဘူးဆိုတာ သိမြင်ပါလျက်၊ VOA အပါအဝင် အခြားပြည်ပ အသံလွှင့် ဌာနများကပါ ငါးမင်းဆွေဟာ NLD ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ အော်ဟစ် ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့ ထုတ်လွှင့် သွားကြပါတယ်။ ဒီလိုထုတ်လွှင့်သွားတာကို ကြားရတဲ့ မြန်မာပြည်သူ အချို့က ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးဒေါသ ဖြစ်ကြပြီး ဖုန်းထဲကနေ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်နှင့် စီးပွားလုပ်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေ တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျွန်တော့်ကို ဆဲဆိုခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်သူ တွေကို ကျွန်တော်လုံးဝ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ သူတို့ကို ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေ ကျွန်တော် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အချို့ဆဲဆို ခြိမ်းခြောက်သူတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ရှင်းပြခွင့်ပင် မပေးဘဲ ရေပက် မဝင်အောင် ဆဲဆိုပြီး ဖုန်းချ သွားကြပါတယ်။ ဒီလို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသား အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် ပြည်ပ အသံလွှင့် ဌာနများက မဟုတ်မမှန် သတင်းတစ်ခုကို မဟုတ်မမှန်မှန်း သိလျက် မြင်လျက်နှင့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာ အလွန်ဝမ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်ဖို့ ကောင်းပါတယ် မစု။ ဒီပြည်ပ အသံလွှင့် ဌာနတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ်နဲ့ မပြေလည်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ခါးပိုက်နှိုက် မဟုတ်ဘဲ သိပါလျက်နဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်၊ ခါးပိုက်နှိုက်လို့ လိုင်းကားပေါ်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ ညာသံပေး အော်ဟစ်ပြီး လူအများရဲ့ ဆဲဆို ရိုက်နှက်မှုကို ခံရအောင် လုပ်ခြင်းနှင့် အတူတူပါပဲ။ ဒါဟာ အင်မတန် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ ယုတ်မာတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား --- နိုဝင်ဘာ(၂၅) ရက်နေ့က မစုတို့ရဲ့ရုံးရှေ့မှာ ကျွန်တော်အော်ဟစ် ဆန္ဒပြခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းကို မစုတို့ ရုံးအဖွဲ့သားများ ကောင်းစွာ သိရှိကြပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင် ထားတဲ့ အသံဖိုင်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို ခွေတွေလည်း မစုတို့ရုံးမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ မရှိရင်လည်း ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ တောင်းယူ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံစွပ်စွဲခြင်း ခံရတဲ့ကိစ္စဟာ မစုနဲ့ ဦးဝင်းထိန်တို့ကို တွေ့ဆုံရန် လာရောက်ခြင်းကြောင့် မစုတို့ ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မစုအနေနဲ့ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးပါလျှင် အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ကာကွယ် ပေးလိုပါလျှင် မဟုတ်မမှန် သတင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော လူယုတ်မာ ပြည်ပအသံလွှင့် ဌာနများကို မစုအနေဖြင့် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြီး တရားဝင် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချပြောဆို သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်ပါတယ် မစု။ နောက်ပြီး ဒီလိုလူယုတ်မာ အသံလွှင့် ဌာနတွေရဲ့ မစုအပေါ် မြှောက်စား ချီးမွမ်းခန်း ထုတ်နေကြတာ တွေကိုလည်း မစု မခံယူ သင့်တော့ပါဘူး။ ဒီလူယုတ်မာ ပြည်ပအသံလွှင့် ဌာနတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း လုပ်တာတွေ ကိုလည်း မစု အဆက်အသွယ် ဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလူယုတ်မာ ပြည်ပအသံလွှင့် ဌာနတွေကြောင့် မစု လိုချင်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို ခုထက်ထိ မရနိုင်တာလို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်ပါတယ်။ ဒီလူယုတ်မာ ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာန တွေနဲ့ မစု အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ မစုလိုချင်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးဟာ ပေါ်ထွန်းပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- နိုဝင်ဘာလ(၂၄) ရက်နေ့က ကျွန်တော် ပေးပို့ခဲ့တဲ့ “ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သို့ (၂)” အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ဖတ်ပြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒီအိတ်ဖွင့် ပေးစာဟာ ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် အချို့မှာ ပါရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်တာမို့ မြန်မာ ပြည်သူတွေလည်း ဖတ်ပြီးကြပါပြီ။ ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာန တွေလည်း အင်တာနက်မှာ ဖတ်ပြီးပြီလို့ ထင်မိပါတယ်။ စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်ခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို မစုဘက်က ပြန်လည် ဖြေရှင်းတာ မရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်တော် နှင့်တကွ မြန်မာ ပြည်သူတွေဟာ စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်း ဆိုတာ အကြမ်းဖက်ခြင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို မစု အနေနဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ငြင်းမှာလား ဒါမှမဟုတ် စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာ အကြမ်းဖက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ မစုအနေနဲ့ ဝန်ခံလာမှာလား ဆိုတာကို သိချင်နေကြပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား --- စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်ခြင်း မဟုတ်ဘူးလို့ မစု ငြင်းခဲ့ပါလျှင် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်း မီဒီယာများ ရှေ့မှောက်မှာ မစုနဲ့ ကျွန်တော် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး လိုပါတယ်။ စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းသည် အကြမ်း ဖက်ခြင်းဖြစ်သည် ဆိုသော ကျွန်တော်၏ ယုံကြည်ချက်အပေါ် စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို တောင်းဆိုခဲ့သော မစုဘက်က ဘာမှ သဘောထား မှတ်ချက် မပေးလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစုနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့် မပြုလျှင်သော် လည်းကောင်း ကျွန်တော် ငါးမင်းဆွေ အနေဖြင့် မစုတို့ ရုံးရှေ့တွင် ထပ်မံဆန္ဒ ပြရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။မစု ခင်ဗျား စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို ငွေကြေး အကူအညီ မပေးကြတော့ပါဘူး။ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်မှု လျော့နည်းခဲ့တဲ့ အပြင် ရှိပြီးသား ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပါ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး သားတစ်ကွဲ မယားတစ်ကွဲနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှာ မျက်နှာငယ် အနှိမ်ခံဘဝနဲ့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် နေကြရပါတယ်။ နည်းပညာ ရရှိမှုတို့လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ပါတယ်။ အသိသာဆုံး ကတော့ အထည်ချုပ် စက်ရုံ (၈၀)% လောက် ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး သိန်းချီတဲ့ အထည်ချုပ် အလုပ်သမလေးတွေ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ အလုပ်သမလေး တွေဟာ KTV ဆိုင်တို့ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်း ပေါ်တို့ ရောက်ပြီး ဘဝပျက်ခဲ့ ကြရပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း ပြည်ပထွက်ပြီး ဘဝပျက်ခဲ့ ကြရပါတယ်။ AIDS ရောဂါတွေ စွဲကပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အသက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြ ရပါတယ်။ သူတို့ကို မှီခိုနေတဲ့ လူမမယ် ကလေးများလည်း ဒုက္ခ ဆင်းရဲတွင်းထဲ ရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့ အရေအတွက်တွေ ဘယ်လောက်များ သလဲလို့ မေးရင်တော့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေဟာ အရှက်ကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားတဲ့ အတွက် စာရင်းပြုစုနိုင်ဖို့ တော်တော် ခက်ပါလိမ့်မယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ဖက်ဆစ်ကို ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဖက်ဆစ်စနစ် ဆိုးကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေ ထိခိုက်နစ်နာ လာတဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ သူ့အမှားသူသိပြီး ဖက်ဆစ်ကို ပြန်လည် တွန်းလှန်ခဲ့ပါတယ် မစု။ ဗိုလ်ချုပ်က ဖက်ဆစ်စနစ်ကို ဘယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်အိမ်မှာ တရိုတသေ သိမ်းထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းများ စာအုပ်ထဲမှ စာတစ်ပိုဒ်ကို တိကျစွာ ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ “ဖက်ဆစ်စနစ်၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ဆိုလို့ ဗမာပြည်မှာ ယောင်ဝါးဝါးတွေ အများကြီး ဖြစ်နေကြတယ်၊ ဖက်ဆစ်စနစ် ဆိုတာဘာလဲ၊ ကြမ်းသင့်လို့ ကြမ်းတာကို ဖက်ဆစ်စနစ်လို့ ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်နဲ့ စိတ်မသင့်တာ လုပ်သမျှကို ဖက်ဆစ်စနစ်လို့ ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ငွေပင်ငွေရင်းရှင် (Fanancial Capitatists) ကြီးတွေက လက်ကိုင်ဒုတ် လုပ်ထားတဲ့ တပည့်တွေနဲ့ တိုင်းသူပြည်သား လူအများကို အကြမ်းပတမ်း ဖိနှိပ်ပြီး အင်မတန် ကျဉ်မြောင်း မှားယွင်းတဲ့ လူမျိုးရေး တရား လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဝါဒဟာ ဖက်ဆစ်ဝါဒဘဲ" လို့ ဗိုလ်ချုပ် ပြောကြားခဲ့ ပါတယ် မစု။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဖက်ဆစ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည်သူ့လွတ် မြောက်ရေး (ဖဆပလ) အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကို ဖွဲ့ပြီး မြန်မာပြည်တွင် မက ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပါ ဖက်ဆစ်စနစ်ဆိုး ပပျောက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- ခုအခါမှာ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်အုပ်စု စတဲ့ ငွေပင်ငွေရင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ စနစ်သာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် မှန်ကန်တယ်လို့ ကြွေးကြော် အကြောင်းပြပြီး သူတို့သြဇာ လွှမ်းမိုးလို့ မရ နိုင်တဲ့ စီးပွားဓန အင်အားနည်းတဲ့ နိုင်ငံငယ်တွေမှာ သူတို့ လက်ကိုင်တုတ်တွေ အာဏာ ရရှိစေဖို့ စီးပွားရေး လက်နက်နဲ့ နိုင်ငံငယ်က ပြည်သူပြည်သား တွေကို အကြမ်းဖက် နှိပ်ကွပ် လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ အနောက် အုပ်စုတွေရဲ့ စန်ရှင်ဝါဒဟာ ဖက်ဆစ် လက်သစ်ဝါဒ ဖြစ်ပါတယ် မစု။ စန်ရှင်ဆိုတဲ့ ဖက်ဆစ် လက်သစ်ဝါဒဆိုးကို မစု မဖြစ်မနေ တွန်းလှန် သင့်ပါတယ်။ ဖက်ဆစ်ကို ခေါ်လာတာ ဗိုလ်ချုပ်ပါ။ ဖက်ဆစ်ကို တွန်းလှန်တာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဖက်ဆစ်ကို တွန်းလှန်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ဖက်ဆစ်စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံထံမှ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ နစ်နာကြေးငွေတွေ၊ စီးပွားရေး အကူအညီတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ် မစု။မစု ခင်ဗျား--- စန်ရှင် စနစ်ဆိုးကြီး မြန်မာပြည်ကို ရောက်အောင် ဖိတ်ခေါ် တောင်းဆိုခဲ့တာ မစုပါ။ ဒီစန်ရှင် စနစ်ဆိုးကြီးဟာ မြန်မာပြည်သူ တွေကို ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့တာကြောင့် စန်ရှင် စနစ်ဆိုးကို မစုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူများ တိုက်ဖျက် ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအပေါ် စန်ရှင်စနစ်ဆိုး ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေကနေ နစ်နာကြေးတွေ ရရှိအောင်၊ စီးပွားရေး အထူး အခွင့်အရေးတွေ၊ အကူအညီတွေ၊ နည်းပညာတွေ နှစ်ထပ်တိုး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် ကြရပါလိမ့်မယ်။ မစု အနေနဲ့ စန်ရှင် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည်သူ ချမ်းသာရေး (စရပခ) အဖွဲ့ချုပ်ကြီး အမြန် ဖွဲ့စည်းပြီး ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဖက်ဆစ်စနစ် ဆိုးကို တိုက်ဖျက်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကို ရယူပေးခဲ့သလို မစုအနေနဲ့ စန်ရှင်စနစ်ဆိုးကို တိုက်ဖျက်ပြီး ပြည်သူများ ချမ်းသာ ကောင်းစားရေးကို လုပ်ပေးနိုင်မယ် ဆိုပါလျှင် မစုတို့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင် တောင့်တနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက် လာပါမယ်လို့ ရိုသေစွာ အကြံပြု ရေးသား တင်ပြ လိုက်ပါတယ် မစု။ငါးမင်းဆွေMyanmar Express
[image: Photo: တေးသီချင်း နားထောင်ခြင်းဖြင့် လေဖြတ် ခံရသည့် လူနာများ ရောဂါ သက်သာ စေနိုင် မေလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃ လေဖြတ် ခံရသည့် လူနာများ၏ အခြေအနေ တိုးတက် ကောင်းမ...
အစ္စလာမ်ဥပဒေ( Sharia Law) မှာ honor Killing ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် သတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်..အလ္လာရဲ့ ဥပဒေပါ
ကျားဟာ သားစားသတ္တ၀ါဖြစ်ပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ သားသမီးကို ပြန်မစားဘူး..ဒါပေမဲ့ မွတ်စလင်တွေက တော့ အလ္လာရှင်မြတ် အတွက်ဆိုရင် ကိုယ့်သားသမီးကိုတောင် ကိုယ်ပြန်သတ်ရပါတယ် ...